पीसीआर गर्नेको भीड थाम्नै मुस्किल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सीमित परीक्षण क्षमता भए पनि उपत्यकाका सरकारी प्रयोगशालामा दिनहुँ सयौंको संख्यामा पीसीआर गराउनेको घुइँचो लागिरहेको छ ।
आश्विन १२, २०७७ फातिमा बानु
काठमाडौँ — आइतबार बिहान ३ बजेतिर मीरादेवी टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगिन् । अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गर्नेको लाइन कहाँबाट सुरु भएको हो मेसो पाउन उनलाई सकस भयो ।
अस्पतालभन्दा करिब एक किलोमिटर टाढा पुगेपछि मात्रै लाइन टुंगियो । विष्णुमती नदीपारिबाट लाइन लागेकी उनले दिउँसो २ बज्दासम्म पनि अस्पताल छिर्न पाएकी थिइनन् । तर यत्तिकैमा स्वाब संकलन कार्य बन्द भयो ।
‘रातभरि अनिँदो बसेर लाइन बसियो, पालै आएन,’ उनले भनिन्, ‘घरबेटीले रिपोर्ट नआई कोठा नपस्नू भनेका छन् । आज भने अस्पतालमै सुत्छु ।’ १७ वर्षदेखि काठमाडौंमा ठेलागाडामा व्यापार गरेर गुजारा गर्दै आएकी उनी लकडाउनपश्चात् भारत रक्सौलस्थित घर गएकी थिइन् । गाउँमा गुजारा गर्न नसकेपछि काठमाडौं फर्किएकी उनलाई घरभेटीले पीसीआर रिपोर्टबिना कोठामा पस्न दिएनन् । पीसीआर रिपोर्ट नआउन्जेल दुई छोरी र श्रीमान्सहित उनले अस्पताल परिसरमै सुत्ने निधो गरेकी छन् ।
भारतको मोतीहारीबाट शनिबार दिउँसो काठमाडौं फर्किएका ६७ वर्षीय बासठ साह पनि आइतबार दिउँसो पीसीआर गराउनेको लाइनमै भेटिए । घरभेटीले कोठा छिर्न नदेलान् भनेर उनले भारतमै गरिएको कोरोना नेगेटिभ आएको रिपोर्ट पनि बोकेर आएका थिए । घरभेटीले ‘भारतको रिपोर्ट नेपालमा मान्य हुँदैन, टेकुकै रिपोर्ट चाहिन्छ’ भनेपछि उनी लुगाफाटाको पोको बोकेरै अस्पताल पुगेका हुन् ।
‘लामो यात्रा गरेर हो कि ज्वरो आएको छ, शरीर पनि दुखेको छ,’ उनले भने, ‘स्वाब दिएर रिपोर्ट नआएसम्म जाने ठाउँ छैन, बूढो मान्छे उल्टै बिरामी हुने भएँ ।’ फलफूल बेचेर गुजारा धान्ने उनी लकडाउन खुलेपश्चात् फेरि गरिखाने बाटो खुल्यो भनेर काठमाडौं फर्किएका हुन् ।
वीरगन्जका ३१ वर्षीय दिलीपकुमार मण्डल पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने भन्दै शनिबार बेलुका ८ बजेदेखि टेकु अस्पतालमा लाइन बसे । आइतबार दिउँसो २ बजेसम्म उनी अस्पतालको मूलगेट बाहिरै थिए, पालो आउने–नआउने निश्चित थिएन । ‘भतिजो र म पालैपालो लाइनमा बस्यौं । आफ्नो पालो नहुँदा खोला नजिकैको चौतारोमा सुतें,’ उनले भने । उनीसँग पनि वीरगन्जमै परीक्षण गरिएको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट थियो । तैपनि घरभेटीले कोठा छिर्न नदिएको उनले गुनासो गरे ।
निषेधाज्ञा खुलेसँगै टेकु अस्पतालमा पीसीआर गराउनेको भीड थामिनसक्नु हुन थालेको छ । बिहान १० बजेदेखि मात्रै स्वाब संकलन हुने यो अस्पतालमा लाइन बस्नका लागि अघिल्लो दिन साँझ ७ बजेदेखि नै मानिसहरू पुग्ने गरेका छन् । दैनिक ७ सय जनासम्म लाइनमा लाग्ने गरेका अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हाम्रो परीक्षण क्षमता दिनमा तीन सयभन्दा बढी छैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई २० घण्टा लगातार काममा लगाउँदा पनि स्वाब संकलन र परीक्षण गर्न भ्याइनभ्याइ छ,’ उनले भने, ‘उपत्यका बाहिरबाट आउनेको त भीड छ नै, अन्य सरकारी अस्पतालले पनि पीसीआर गर्न यहीं पठाइदिन्छन्, हाम्रो क्षमताले भ्याउने स्थिति छैन ।’ यसरी अस्पताल पुग्नेहरू अधिकांश भारतीय नागरिक हुने गरेको अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका डा. श्रवणकुमार मण्डलले बताए । ‘घरभेटीले छिर्न दिएनन् भनेर अस्पतालमा बस्छन् । बेड चाहियो भनेर झगडा पनि गर्छन्,’ उनले भने, ‘ठाउँ भएसम्म हामीले अस्पतालको आँगनमै सुत्न भन्यौं । यसरी भीड गरेपछि उहाँहरूलाई अस्पतालबाटै संक्रमण सर्ने उच्च जोखिम छ ।’
अस्पताल पुगेका अधिकांशलाई परीक्षण गर्न आवश्यक नै नरहेकाले फर्काइने गरिएको उनले बताए । भीड लाग्न थालेपछि एक दिन करिब ६ सय जनाको स्वाब लिएर परीक्षण गर्दा ६० जनाको मात्रै रिपोर्ट पोजिटिभ आएको उनले बताए । भाडामा बस्नेलाई घरभेटीले अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्न पठाउनुभन्दा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घरबाहिर निस्कन दिए समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।
लकडाउन खुलेसँगै उपत्यका छिर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । जसका कारण पीसीआर परीक्षण गर्न राजधानीका सरकारी अस्पताललाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । टेकुमा जस्तै वीर अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्न चाहनेको उत्तिकै घुइँचो लाग्ने गरेको छ । दुई सय नमुनाको मात्रै परीक्षण गर्ने क्षमता भएको वीरमा दैनिक पाँच सय जना पुग्ने गरेका अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेञ्चुरीले बताए । ‘त्यही पनि मेसिन बिग्रिरहन्छ, कहिले किट पुग्दैन,’ उनले भने, ‘एकै पटक धेरै परीक्षण गर्न सक्ने अटोमेटिक मेसिन पनि बजेट नभएर खरिद भएको छैन, भीड थाम्नै मुस्किल भयो ।’ सरकारले २ हजार रुपैयाँमा पीसीआर गर्ने निर्णय गरेपछि भीड अझै बढेको उनले बताए ।
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा पनि परीक्षण गर्नेको संख्या बढ्दो छ । पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्ने अधिकांश उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरू हुने गरेका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको भन्दै अनावश्यक भीड लाग्ने गरेको तर चाप बढेअनुसार पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव रहको उनको भनाइ छ । तीन सय नमुनाको परीक्षण गर्ने क्षमता भएको यो अस्पतालमा दैनिक ५ सय जनाभन्दा बढी पुग्ने गरेका छन् ।
दैनिक एक सय ८० नमुनाको परीक्षण गर्ने क्षमता छ महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको । परीक्षणका लागि ट्राभल हिस्ट्री भएका र कन्ट्याक ट्रेसिङमा परेका भन्दा पनि घरभेटीले कोठामा छिर्न नदिएकाहरूको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन संयोजक डा. सन्तकुमार दासले बताए । ‘आएजति सबैको परीक्षण गर्ने क्षमता हाम्रो छैन, फर्काइदिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दैनिक २५० वटा नमुनासम्म परीक्षण गर्ने क्षमता बढाउने योजना छ तर टुंगोमा पुगेका छैनौं ।’
थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा पनि एक साताअघिदेखि पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । यहाँ दैनिक ४० वटा नमुना परीक्षण हुन्छ । तर एक सय जनाभन्दा बढी पुग्ने गरेका अस्पताल प्रशासन प्रमुख रानु थापाले बताइन् । ‘आएजति सबैको स्वाब संकलन गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘उपकरण र जनशक्ति नथपिएसम्म माग पूरा गर्न सकिँदैन ।’
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:१५
सिटौला पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि पौडेल पक्षले तयार गरेको विरोधपत्र आइतबार पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराइएन ।
आश्विन १२, २०७७ कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — पार्टीको आन्तरिक मुद्दामा एउटै आवाज देखिए पनि संस्थापन इतर खेमा एउटै मोर्चामा उभिन सकेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच गहिरिएको अविश्वास यसको मुख्य कारण देखिएको छ ।
महाधिवेशनलाई प्रभावमा पार्नका निम्ति सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरीतका निर्णयहरू गर्दै जान थालेकामा पौडेल र सिटौला दुवैले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । दुवैले यस्ता
काम नगर्न सभापति देउवालाई चेतावनी पनि दिएका छन् तर एकै ठाउँमा रहेर आवाज उठाउन सकेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउन लागेको विरोधपत्रमा सिटौलाको असहमति । सभापति देउवाका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध पौडेल पक्षले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा सामूहिक हस्ताक्षरसहित विरोधपत्र दर्ता गराउन खोजेको थियो । तर सिटौलाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।
केन्द्रीय विभागको गठन र त्यसमा भइरहेको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण, पार्टी संरचनाको समायोजनलगायतका मुद्दा विरोधपत्रमा समावेश थिए । सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यी विषयमा विधानविपरीत निर्णय गराएको आरोप पौडेल पक्षको थियो । सिटौलाले पनि सार्वजनिक रूपमा यस्ता कदमको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसै कारण सामूहिक अभियानबाट देउवालाई दबाब दिनुपर्ने निचोडमा पौडेल पक्ष थियो ।
सिटौला पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र प्रदीप पौडेलसमेत संस्थापन इतर खेमालाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयत्नमा थिए । उनीहरू तीनै जनाले शनिबारसमेत सिटौलालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । ‘ढिलो–चाँडो संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा नआई सुखै छैन, एक ठाउँमा उभिन नसके महाधिवेशन निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने र समयमै पनि नहुने खतरा छ, यो देख्दादेख्दै अहिल्यै सामूहिक अभियानमा किन नजाने ?’ थापा, चौधरी र पौडेलको सारमा भनाइ थियो, ‘अहिल्यै हस्ताक्षर गरेर जाँदा सभापतिलाई बढी दबाब पर्छ । एक ठाउँमा उभिन सके विधानविपरीतको बाटो हिँड्न सभापतिलाई गाह्रो पर्छ ।’
त्यसपछि सिटौला पौडेलसँग भेटेरै कुरा गर्न राजी भए । आइतबार बिहान उनी पौडेल निवास बोहोराटार पुगे । दुवै नेताबीच लामै छलफल भयो । ‘भेटेपछि हस्ताक्षर नगर्ने भनेर फर्किनु भएछ, उहाँले त्यसो भनेपछि हामीले पनि गर्ने कुरा भएन,’ तीनमध्येका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्थापन इतर खेमा एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेन भने पार्टीमा अझै गहिरो संकट आउने खतरा देखिँदै छ ।’
सिटौलाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आइतबार विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रोकिएको छ । पत्रमा पौडेल, महामन्त्री शंशाक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका २७ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । सिटौला पक्षको हस्ताक्षर छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिटौलासहित उनको पक्षमा पाँच सदस्य छन् ।
विरोधपत्र दर्ता गराउने जिम्मा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र दीपक गिरीलाई दिइएको थियो । ‘तयारी गर्दागर्दै आज ढिला भयो, अब भोलि विरोधपत्र दर्ता गराउँछौं,’ जोशीले भने ।
पौडेल र सिटौलाबीचको अविश्वास १३ औं महाधिवेशनदेखिकै हो । १३ औं महाधिवेशनमा सिटौलाले पौडेललाई साथ दिएनन् । उनी आफैं सभापतिका प्रत्याशी भए । देउवा, पौडेल र सिटौलाबीचको प्रतिस्पर्धामा कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत ल्याउन सकेनन् । विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा सिटौला प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए । बढी मत ल्याउने देउवा र पौडेलबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो । सिटौलाकै समर्थनबाट देउवा विजयी भए । त्यसपछि पौडेल र सिटौलाबीच लामो समयसम्म राम्रो बोलचालसम्म भएन ।
०७४ को निर्वाचनसम्म सिटौला देउवा समूहमै रहेर भागबन्डाको हिस्सेदार हुँदै आए । निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि भने उनी देउवा कित्ताबाट बाहिरिए । केही समय पौडेलसँग जोडिन पनि खोजे । नेता अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापासहितले पौडेल र सिटौलालाई जोड्ने शृंखलाबद्ध बैठकसमेत बसाले । तर, लामो समय टिकेन । बीच–बीचमा दुई नेताबीचको अविश्वास र ठाकठुक चलिरह्यो । पौडेलका पछिल्ला अडानप्रति पनि सिटौलाले विश्वास गरेनन् । त्यसपछि उनले आफ्नै समूह अघि बढाउँदै आएका छन् ।
१४ औं महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर उनले आफ्नो समूहको सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसकेका छन् । सिटौलाले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नचाहनुका पछि केन्द्रीय सदस्य शिव हुमगाईं र पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान पनि कारण बनेका छन् । उनीहरू दुवै पौडेल पक्षसँग जोडिन चाहँदैनन् । सकेसम्म सिटौलालाई समेत देउवासँग मिलाउने र नसके छुट्टै समूहका रूपमा अघि बढ्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । पौडेल पक्षले तयार पारेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिटौलालाई आफ्ना दुई नेताको विश्वास गुमाउनुपर्ने डर पनि थियो । त्यसै कारण उनले महामन्त्री कोइरालाको मात्रै हस्ताक्षर वा पौडेल, आफू र महामन्त्रीको मात्रै हस्ताक्षर गरेर बुझाउन सकिने विकल्पसमेत अघि सारेका थिए ।
‘मेरो धारणा छुट्टै आउँछ’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै पक्षतिर नगई आफ्नो छुट्टै विचार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज १९ गते बोलाइएको छ ।
निष्पक्ष रूपमा पार्टी महाधिवेशन गराउने आफ्नो मुख्य चासो रहेको उनले बताए । ‘पौडेलजीले हामीले एउटा ज्ञापनपत्र बनाएका छौं, त्यसमा सही गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको हो । मैले तपाईंले मात्रै सही गरे त पूरै समूहको प्रतिनिधित्व भइहाल्थ्यो नि, सबैको हस्ताक्षर गर्दा एउटै समूहमा शंका बढाउने काम गर्छ भनें,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने ।
उनले महाधिवेशनको कार्यतालिका नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइसकेकाले केही समय सार्न सभापति देउवा र पौडेललाई सुझाव दिएको बताए । देउवासँग उनले शनिबार भेटेका थिए । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गरेर केन्द्रमा बुझाउने म्याद सकिसकेकाले त्यसलाई संशोधन गर्दै फागुनमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनसमेत एक/दुई महिना सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पौडेल पक्षले भने फागुनमै महाधिवेशन गराउन सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘सहमतिमा कार्यतालिका संशोधन गरिएन भने नेतृत्वलाई प्रक्रियाविपरीत जान झनै सहयोग पुग्छ,’ सिटौलाले भने, ‘यो कुरा पौडेलजीले बुझ्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:१४